Islaantii Anke Anucik Ee 41 Jirka Ahayd Iyo Hooyadeed, Gitta, Ayaa Lagu Qabtay Airportka Liverpool Iyagoo Qof Mayd Ah Ka Dhoofinaya Garoonka!
Anke Anusic oo 41 jir ah iyo hooyadeed oo la yiraahdo Gitta ayaa lagu qabtay airportka magaalada Liverpool ee wadanka Ingiriiska waxaana lagu eedeeyey inay qof mayd ah ka dhoofinayeen garoonka. In mayd la dhoofiyo lama diidana ee waa in si gooniya loo qaadaa, wuuna ka qaalisan yahay in si caadi ah loo dhoofiyo.
Haweenkan oo dhalashadoodu Jarmal tahay ayaa u socday magaalada Baarliin, waxayna wheelchair ama gaariga curyaamiinta ku riixayeen nin muraayad xidhan oo la yiraahdo Curt Jarran. Waxayna shaqaalahii garoonka u sheegeen inuu hurdo.
Laakiin shaqaalihii airportka ayaa shakiyey ka dibna ogaaday inaanu nooleyn. Waxay ku doodeen labada haweenka ihi inuu noolaa markii ay tagsiga ay ka degayeen, isla markaana uu dhintay intii ay safka diyaarada ku jireen.
Waxaana arinkii loo gudbiyey dhakhaatiir cadaysa xiliga uu dhintay, waxayna dhaqaatiirtii cadeeyeen inuu dhintay 12 saacadood guduhood, laakiin aanay sheegi karin waqtiga runta ah ee uu dhintay.
Labadaa dumarka ah oo la sii daayey loona ogolaaday inay maydkooda u qaataan dalka Jarmalka ayaa sheegey in aanay dacweyneyn shaqaalaha garoonka sidii ay ula dhaqmeen.